MWC 2017: Sony, Nokia uye Lenovo vanopa yavo nyowani zvishandiso | IPhone nhau
Parizvino unoshanyira peji rewebhu raunoshanyira nezve tekinoroji, zvingangoita kuti rinoratidza ruzivo nezve zvese zvishandiso zvitsva zviri kuunzwa musystem yeMobile World Congress iyo iri kuitirwa mazuva ano muBarcelona. Kunyangwe muActualidad iPhone isu tisingafanirwe sezvo Apple isina hupo huripo, tinomanikidzwa kukuzivisa iwe nezvezvishandiso zvitsva izvo mumwedzi mishoma zvichave zviripo pamusika seimwe imwe sarudzo kuna Samsung neApple. Pazuva rekutanga risingazivikanwe, Svondo, LG neHuawei vakaratidza yavo mireza mitsva: iyo LG G6 uye iyo Huawei P10. Nezuro Muvhuro kwaive kutendeuka kwaSony, Lenovo neNokia vachiratidza mhando yavo nyowani, iyo isingayedze kukwikwidza neyekumusoro-soro, asi panzvimbo yepakati nepakati nepakati-epakati.
1 Sony nhau paMWC 2017
2 Nokia nhau paMWC 2017
3 Lenovo nhau paMWC 2017: Moto G5 uye G5 Plus
Sony nhau paMWC 2017
Sony yakaratidza iyo Sony Xperia XZ Premium chiri chekutanga chigadzirwa icho inosanganisa skrini ine 4k resolution, chimwe chinhu icho pamberi pevangangove vatengi chakanyanya kunaka asi maererano nehupenyu hwebhatiri hachisi zvachose. Asi yakaratidzawo maviri matsva matsva eXperia XA akateedzana, akateedzana anodhura kune vese vateereri, iyo Xperia Bata purojekita inoratidza mifananidzo patafura uye iyo nyowani Xperia Nzeve.
Nokia nhau paMWC 2017
Nokia inoda kudzoka kuburikidza nemusuwo muhombe kumusika wefoni uye nekuda kweizvi yakaburitsa matatu matsva matsva ezvese zvavanofarira: Nokia 3, Nokia 3 uye Nokia 5. Ese aya mamodheru matsva anomiririra kudzoka kwekambani kumusika, anotipa zvakaringana marongero pamitengo isingapfuure mazana matatu emaeuro. Iyo Nokia 300 inoitirwa vashandisi vakanyudzwa zvizere munyika yemafoni, ine 3-inch screen, 5 GB ye RAM uye ne2 mpx kumashure kamera.
Iyo Nokia 5 inosvika kuzoedza kutsvaga nzvimbo pakati nepakati ne2 GB ye RAM, Snapdragon 430 se processor uye 13 mpx yekugadzirisa mukamera yekumashure. Chekupedzisira, iyo Finnish femu yakaratidza iyo Nokia 6, chinongedzo icho chave kutowanikwa muChina kwevhiki uye kwachiri zvakatsvaira. Iyi terminal inotipa iyo esimbi kupedzisa iyo inotisiya isu tiine yakanaka kwazvo yekunzwa. Mukati medu tinowana processor imwecheteyo seNokia 5, Snapdragon 430, asi ino nguva ichitarisira 3 GB ye RAM uye 5,5-inch screen. Chikamu chekumashure chinotipa iyo 16 mpx kamera.
Lenovo nhau paMWC 2017: Moto G5 uye G5 Plus
Iyo Chinese femu yakaratidza paMWC 2017, chizvarwa chipfumbamwe cheMoto G4 chinongedzo chakave nemhedzisiro yakadaro mumusika. Chinonyanya kushamisa ndechekuti mamodheru ese ari maviri akafanana mukugadzirwa kwekunze uye zvinhu zvinoshandiswa, kusanganisa simbi nepurasitiki. Iyo huru asi iyo yatinowana mune ese mawere ndeyekuti vanoshaya chipenga cheNFC, kuti vakwanise kutenga kuburikidza nefoni.
Iyo Moto G5 inotipa iyo 5-inch skrini ine Full HD resolution, 2/3 GB ye RAM, 13 mpx kumashure kamera uye 5 mpx kumberi kamera, kuverenga kweminwe, IP67 kuchengetedzwa, kunoenderana nekuchaja nekukurumidza uye bhatiri re2.800 mAh . Iyo G5 Plus modhi inotipa imwe yakati wandei skrini, 5,2 inches, 3 GB ye RAM, Snapdragon 625 processor uye 3.000 mAh bhatiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » MWC 2017: Sony, Nokia uye Lenovo vanopa zvavo zvishandiso zvitsva